June 2021 - Khitalin Media
June 30, 2021 by Khitalin Media
အိမျမှာ အပငျလေးတှစေိုကျထားရငျ ပိုးသတျဆေးအစား ဆနျဆေးရညျသုံးမယျ
အိမျမှာ အပငျလေးတှစေိုကျထားရငျ ပိုးသတျဆေးအစား ဆနျဆေးရညျသုံးမယျ စရိတျနညျး ဖို့ ဒီလိုအစပွုပါ။ ပိုးသတျ ဆေးကငျး ရောဂါကငျးပေါ့ သငျ့ အိမျက ဆနျဆေးရညျတှကေိုအကြိုးရှိမယျ့နရောတဈခုခုမှာမသုံးစှဲပဲသှနျပဈနခွေငျးမြိုးလုံးဝမလုပျပါနှငျ့။ အထူးသဖွငျ့သငျဟာစိုကျ ပြိုးရေးနဲ့ ပါတျသကျဆကျနှယျနသေူတဈဦး ဖွဈနတေယျဆိုရငျပိုလို့ တောငျဆငျခွငျ သငျ့ပါတယျ။ ဆနျဆေးရညျမှာဘာတှပေါသလဲဆိုရငျ သကျရှိမြားကို အကြိုး ပွုနိုငျသောဓါတျအဟာရတှမွေောကျမြားစှာပါဝငျနပေါတယျ။လို့သာအလှယျမှတျလိုကျကွပါစို့။ အိုမငျးရငျ့ရျောခွငျးကိုဟနျ့တား စနေိုငျခွငျး၊ မဖွဈမနကြေိုးရမဲ့ “သှား” တှကေို ခိုငျခနျ့စနေိုငျခွငျးနှငျ့ ဖွူသှားတဲ့ “ဆံပငျ”တှတေဖနျပွနျပွီးမဲနကျလာစနေိူငျခွငျးဆိုတဲ့အထိအစှမျး အာနိ သငျမြိုးတှေ ဆနျဆေးရညျမှာ ရှိနပေါတယျ။ စိုကျပြိုးရေးနဲ့ပါတျသကျသညျမြားကိုအဓိကထားတငျရ မယျဆိုရငျအပငျမြားနဲ့ပါတျသကျရငျလဲ မြားပွားလှစှာသောအကြိုးမြား ကိုဖွဈထှနျးစပေါတယျ။ အထှအေထူးစီမံနစေရာမလိုပါဘူး။ ဆနျဆေး ရညျကို အခဉျြဖေါကျပွီး သုံးစှဲယုံသာဖွဈပါတယျ။ အရငျဦးဆုံးဆေးတဲ့ဆနျဆေးရညျကို ရသေနျ့ဗူးအလှတျထဲမှာ ထညျ့အဖုံးကိုမလုံ့တလုံထား။ အေး/ခွောကျမှာ(၇)ရကျထားလိုကျပွီး ရငျပိတျစပါးပါးဖွငျ့စဈယူလိုကျပါ။ ထိုအရညျကို (၆)လခနျ့အထိ အေး ခွောကျမှာသိမျးဆညျးပွီးအသုံးပွုခဲ့ဖူးပါတယျ။ ပွုလုပျ၊သိမျးဆညျးသူရဲ့ သနျ့ရှငျးမှု၊ … Read more
ချိုင်းကြားမည်းခြင်းကို ၁၀၀% ဖယ်ရှာပေးမယ့် နည်းလမ်းများ….
ခြိုငျးကွားမညျးနလေုိ့ လကျပွတျအင်ျကြီတှေ မဝတျရဲလောကျအောငျ အဟနျ့တားဖွဈစနေသေလား။ လကျတှမွေောကျဖို့ လိုနခြေိနျမှာ အနရေခကျဖွဈနလေား။ ဒါလေး ဖတျပါ သငျ့ကို အကူအညီဖွဈစပေါလိမျ့မယျ။ ယငျးပွသနာတှအေားလုံး ဖွရှေငျးပေးမယျ့ လုံးဝသဘာဝအလြောကျ ထိရောကျတဲ့နညျးလမျးတှေ ဖွဈပါတယျ။ ဆေးနညျးမြားနဲ့ အညှနျးမြား စားဆျောဒါ (Baking Soda)စားဆျောဒါနဲ့ ရေ ရောစပျပါ။ မညျးနကျနတေဲ့ ခြိုငျးမှာ လိမျးပါ။ ၁၀ – ၁၅ မိနဈ ထားပွီး မအေးလှနျးသော ရဖွေငျ့ ဆေးကွောပါ။ ပနျးသီးရှာလကာရညျ ပနျးသီးရှာလကာရညျကို ခြိုငျးမှာ လူးပေးပါ။ ၅ မိနဈပွီးရငျ ဂှမျးလေးဖွငျ့ သုတျပေးပါ။ ရဖွေငျ့ မဆေးပါနဲ့။ အာလူး အာလူးကို ကွိတျခပြွေီး ခပျပဈြပဈြဖွဈအောငျ ဖနျတီးပါ။အဲဒီခပျပဈြပဈြအရညျကို ခြိုငျးမှာ လူးပေးပွီး မိနဈ ၃၀ ကွာပွီးနောကျ ရဖွေငျ့ … Read more
မိုးတှငျးကာလဆိုတာ ဦးရပွေားပျေါမှာ ယားယံမှုတှကေို ဖွဈပျေါစတေဲ့ကာလပါ။ အုနျးဆီကို အနှေးဓာတျပေးပွီး ဦးရပွေားပျေါ လိမျးခွယျနှိပျနယျပေးပါ။ ဆံပငျကို မိုးရမေစိုအောငျ ဂရုစိုကျပါ။ စိုသှားရငျ ရှနျပူနဲ့ခကျြခငျြးခေါငျးလြှျောပွီး အခွောကျခံပါ။ မိုးတှငျးကာလမှာ ရှနျပူအပြော့စားနဲ့ ခေါငျးလြှျောပါ။ Conditioner ကိုလညျး သုံးပေးပါ။ မိုးတှငျးတလြှောကျလုံး ဆံပငျအရောငျဆိုးခွငျးကို ရှောငျကွဉျပါ။ ဆံသားတောကျပမှုကို ထိနျးသိမျးဖို့ ဓာတုပစ်စညျးမပါတဲ့ သဘာဝထုတျကုနျတှကေို အသုံးပွုပါ။ လှပဖို့အားစိုကျထုတျနရေတဲ့ပုံစံထကျ သဘာဝကတြဲ့ဆံပငျပုံစံမြိုး ညှပျပါ။ ခေါငျးလြှျောပွီးရငျ လမှေုတျစကျမသုံးဘဲ တဘကျနဲ့အခွောကျခံပွီး အစိုဓာတျထိနျးသိမျးပေးပါ။ သိမှတျသငျ့တဲ့ဗဟုသုတလေးတှကေို ပွနျလညျမြှဝဖေို့ ဒီစာစောငျလေးကို SHARE လိုကျပါဦးနျော။ Zawgyi မိုးတွင်းကာလဆိုတာ ဦးရေပြားပေါ်မှာ ယားယံမှုတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ကာလပါ။ အုန်းဆီကို အနွေးဓာတ်ပေးပြီး ဦးရေပြားပေါ် လိမ်းခြယ်နှိပ်နယ်ပေးပါ။ ဆံပင်ကို မိုးရေမစိုအောင် ဂရုစိုက်ပါ။ စိုသွားရင် ရှန်ပူနဲ့ချက်ချင်းခေါင်းလျှော်ပြီး အခြောက်ခံပါ။ … Read more
သက်ရောက်ရှစ်ပုံ-ဟောမကုန်ဆိုသည့်အတိုင်း ကျွန်တော် ဒီပို့လေး တစ္ခုထဲမွာပဲ သက်ရောက်ရှစ်မျိုးစလုံး ပေါင်း၍ ရေးသွားပါမည်။ သက်ရောက်ဂြိုလ် တွက်နည်းကိုတော့ အောက်ဆုံးတွင် ပုံနှင့် တကြ တွက်ပုံတွက်နည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ တွက်ကြည့်ပြီးမှ ဟောကိန်း ဖတ်ပါရန် . ကဲ မိမိ သကျရောကျဂွိုလျ အလိုကျ ဆောငျရနျ ရှောငျရနျ များ ဖတျရှုနိုငျပါပွီ. (တနင်္ဂနွေဂြိုလ် သက်ရောက်ဟာကိန်း) ဂြိုလ် (၇)ရက် သားသမီး မည်သူမဆို တနင်္ဂနွေ သက်ရောက်သို့ ကျရောက်ပါက. အိမ်သစ်ဝင်ခြင်း။ လုပ်ငန်းသစ်ပေါ်ခြင်း။ အလုပ်အကိုင် တိုးတက်ခြင်း။ နေရာကောင်းရခြင်း။ ငယ်ရွယ်သူဖြစ်ပါက အိမ်ထောင်ကျတတ်ခြင်း။ လူအမား၏ အထင်ကြီး ခံရခြင်း။ သူခိုးခိုး ခံရခြင်း။ ဘုရားဖူးခရီးသွားရခြင်း။ ဆွေမျိုးဧည့်သည့် ရောက်လာခြင်း။ အတောင်ပါသော သတ္တဝါ ၀င်လာခြင်း။ သွတ်သံသစ်ဝင်ခြင်း။ အိမ်သာပြင်ရခြင်း။ … Read more
ကဒ်တစ်ကဒ်ကိုရွေးပြီး သင့်အတွက် အရေးကြီးတဲ့ သတင်းစကားကို ရယူပါ….
ကဒ်တစ်ကဒ်ကိုရွေးပြီး သင့်အတွက် အရေးကြီးတဲ့ သတင်းစကားကို ရယူပါ…. 1 သင်က ရုပ်ဝတ္ထုကမ္ဘာထဲက အောင်မြင်မှုတွေ တိုးတက်မှုတွေ အပေါ်စူးစိုက်နေပြီးတော့ ခံစားမှုဆိုင်ရာတွေ၊ အလှရသတွေကို လျစ်လျူရှုထားသလိုဖြစ်နေတယ်။ အဲ့ဒီလိုရှိတာကြောင့် တခြားသူတွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားခံရမှုတွေ လျော့ပါးနေတယ်၊ သူတို့အတွက် သင်က ငြီးငွေ့စရာကောင်းတဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်နေတယ်။ ဒီအချိန်မှာ သင်အနေနဲ့ ပူလောင်စရာတွေရှိနေမယ်၊ မတက်ကြွမှုတွေ၊ ဘာဆိုဘာမှ လုပ်ဖို့ ဆန္ဒမရှိသလိုဖြစ်နေမယ်။ ဘယ်နေရမှာမဆို စိတ်မပါ လက်မပါနဲ့၊ ထိုင်းထိုင်းမှိုင်းမှိုင်းဖြစ်နေမယ်၊ ပျင်းရိခြောက်ကပ်ပြီး အားငယ်နေတာတွေနဲ့လည်း ကြုံနေရမယ်။2သင့်အနေနဲ့ ခိုင်မာတည်မြဲမှုတွေရှိနေပြီး အနာဂတ်မျိုးဆက်အတွက် လက်ဆင့်ကမ်းရမယ့် အရာတွေရှိနေတယ်။ မိသားစု စီးပွားရေးကတော့ အထင်းအရှားဆုံးရှိမယ့်အရာဖြစ်တယ်။ ကံကောင်းမှုတွေ ဝေဆာနေမယ်။ အငှားအရမ်းကိစ္စ၊ အိမ်ခြံမြေကိစ္စတွေ အထူးကောင်းမွန်နေမယ်။ မိသားစု ဂုဏ်တက်စရာတွေရှိနေမယ့် ကာလဖြစ်တယ်။ သင်ကတော့ အခုချိန်မှာ … Read more
ပိန်တဲ့သူတွေမှာပဲ ရှိတဲ့ ဆွဲဆောင်မှုအားကောင်းစေတဲ့ အချက်များ…
ပိနျတဲ့သူတှမှောပဲ ရှိတဲ့ ဆှဲဆောငျမှုအားကောငျးစတေဲ့ အခကျြမြား… “ပိနျလိုကျတာ ပိနျလိုကျတာ” ဆိုတဲ့ စကားတှေ ခဏခဏ ကွားနလေို့ အားမငယျပါနဲ့။ လကျတှမှေ့ာ ပိနျတာလေးကမှ ပိုဆှဲဆောငျမှု ရှိတာပါ။ ပိနျခငျြလို့ gym သှားနရေတဲ့သူတှမှေ တဈပုံကွီးပဲ မဟုတျလား။ ပိနျတာလေးကိုမှ အားကနြတေဲ့သူတှေ အမြားကွီးပဲမို့ စိတျဓာတျကြ ဝမျးနညျးမနပေါနဲ့တော့ အရိုးလေးတို့ရေ။ အဲ့သညျ့ slim body ပိုငျရှငျလေးတှမှောပဲ ရှိတဲ့ ဆှဲဆောငျမှု အားကောငျးတဲ့ အခကျြတှကေို ဖျောပွ လိုကျရပါတယျနျော …. (၁) အဆီမရှိတာ” ပိနျပါတယျဆိုမှ အဆီ ဘယျရှိပါ့မလဲနျော။ အဆီရှိတာက ခန်ဓာကိုယျအတှကျလညျး သိပျမကောငျးပါဘူး။ ဒါ့အပွငျ အဆီရှိတဲ့သူထကျ အဆီမရှိတဲ့သူတှကေို လူတှကေ ပိုသဘောကတြတျပါတယျတဲ့။ ပုရိသတှကေ သဘောကတြတျကွသလို မိနျးကလေးခငျြးလညျး အားကသြဘောကတြတျကွပါသေးတယျ။ ဒါကွောငျ့ … Read more
June 29, 2021 by Khitalin Media
ဤဆေးနညျးသညျဆီးကြောကျတညျ၍ဆီမသှားခွငျးဆီးခြုပျခွငျး၊ဆီးနီခွငျး၊ဆီးအောငျ့ခွငျး၊ဆီးနညျးခွငျး၊ဆီးသှားသညျ့အခါဆီးလမျးကွောငျးနာကငျြခွငျး၊ကြောကျကပျ ကြောကျတညျခွငျးအတှကျလကျတှအေ့သုံးပွုသပျသာပြောကျကငျးခဲ့သောဆေးနညျးဖွဈပါတယျ၎ငျးဆေးနညျးအား မြှဝပေေးလိုကျပါတယျပွုလုပျပုံ၁။ငါးပုတျသငျခေါငျးထဲမှ ကြောကျကိုကြှမျးအောငျလှျောအမှုနျ့ကွိတျပွီး၎ငျးအမှုနျ့ (၁)ကပျြသားနှငျ့ မကျလငျခဉျြမှုနျ့ (၁)ကပျြသားကိုရောပါ၂။ သံပုရာသီး (၁)လုံးအရညျညှဈပါ၃။ရောထားသောဆေး မှုနျ့လကျဖကျစားဇှနျး၁ဇှနျးခနျ့ကို၎ငျးသံပုရာရညျနှငျ့သောကျပါ(၃)ရကျဆကျတိုကျသောကျပါကြောကျမြားကပြေါမညျ ဆီးသှားသညျ့အခါကြောကျမှုနျအနညျမြားဆီးနှငျ့အတူ ပါလာပါမညျညအိပျရာဝငျတိုငျးကြောကျဖရုံသီးအရညျ၁ခှကျ သောကျပါ)ကလေးငယျမြားဆီးမသှားသျော၎ငျးဆေးမှုနျ့အား ဆီးခုံသို့လိမျးပေးခွငျးဖွငျ့ဆီးရှငျရှငျသှားပါလိမျ့မညျ ဤဆေးနည်းသည်ဆီးကျောက်တည်၍ဆီမသွားခြင်းဆီးချုပ်ခြင်း၊ဆီးနီခြင်း၊ဆီးအောင့်ခြင်း၊ဆီးနည်းခြင်း၊ဆီးသွားသည့်အခါဆီးလမ်းကြောင်းနာကျင်ခြင်း၊ကျောက်ကပ် ကျောက်တည်ခြင်းအတွက်လက်တွေ့အသုံးပြုသပ်သာပျောက်ကင်းခဲ့သောဆေးနည်းဖြစ်ပါတယ်၎င်းဆေးနည်းအား မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ပြုလုပ်ပုံ၁။ငါးပုတ်သင်ခေါင်းထဲမှ ကျောက်ကိုကျွမ်းအောင်လှော်အမှုန့်ကြိတ်ပြီး၎င်းအမှုန့် (၁)ကျပ်သားနှင့် မက်လင်ချဉ်မှုန့် (၁)ကျပ်သားကိုရောပါ၂။သံပုရာသီး (၁)လုံးအရည်ညှစ်ပါ၃။ရောထားသောဆေး မှုန့်လက်ဖက်စားဇွန်း၁ဇွန်းခန့်ကို၎င်းသံပုရာရည်နှင့်သောက်ပါ(၃)ရက်ဆက်တိုက်သောက်ပါကျောက်များကျေပါမည် ဆီးသွားသည့်အခါကျောက်မှုန်အနည်များဆီးနှင့်အတူ ပါလာပါမည်ညအိပ်ရာဝင်တိုင်းကျောက်ဖရုံသီးအရည်၁ခွက် သောက်ပါ)ကလေးငယ်များဆီးမသွားသော်၎င်းဆေးမှုန့်အား ဆီးခုံသို့လိမ်းပေးခြင်းဖြင့်ဆီးရွှင်ရွှင်သွားပါလိမ့်မည် Zawgyi ဤဆေးနည်းသည်ဆီးကျောက်တည်၍ဆီမသွားခြင်းဆီးချုပ်ခြင်း၊ဆီးနီခြင်း၊ဆီးအောင့်ခြင်း၊ဆီးနည်းခြင်း၊ဆီးသွားသည့်အခါဆီးလမ်းကြောင်းနာကျင်ခြင်း၊ကျောက်ကပ် ကျောက်တည်ခြင်းအတွက်လက်တွေ့အသုံးပြုသပ်သာပျောက်ကင်းခဲ့သောဆေးနည်းဖြစ်ပါတယ်၎င်းဆေးနည်းအား မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ပြုလုပ်ပုံ၁။ငါးပုတ်သင်ခေါင်းထဲမှ ကျောက်ကိုကျွမ်းအောင်လှော်အမှုန့်ကြိတ်ပြီး၎င်းအမှုန့် (၁)ကျပ်သားနှင့် မက်လင်ချဉ်မှုန့် (၁)ကျပ်သားကိုရောပါ၂။ သံပုရာသီး (၁)လုံးအရည်ညှစ်ပါ၃။ရောထားသောဆေး မှုန့်လက်ဖက်စားဇွန်း၁ဇွန်းခန့်ကို၎င်းသံပုရာရည်နှင့်သောက်ပါ(၃)ရက်ဆက်တိုက်သောက်ပါကျောက်များကျေပါမည် ဆီးသွားသည့်အခါကျောက်မှုန်အနည်များဆီးနှင့်အတူ ပါလာပါမည်ညအိပ်ရာဝင်တိုင်းကျောက်ဖရုံသီးအရည်၁ခွက် သောက်ပါ)ကလေးငယ်များဆီးမသွားသော်၎င်းဆေးမှုန့်အား ဆီးခုံသို့လိမ်းပေးခြင်းဖြင့်ဆီးရွှင်ရွှင်သွားပါလိမ့်မည် ဤဆေးနည်းသည်္ဆီးကေ်ာက္တည်၍ဆီမသြာျးခင်းဆီးခ်ုပ်ျခင်း၊ဆီးနျီခင်း၊ဆီးအောင့်ျခင်း၊ဆီးနည်ျးခင်း၊ဆီးသြားသည့်အခါဆီးလမ်းကြောင်းနာက်င်ျခင်း၊ကေ်ာက္ကပ် ကေ်ာက္တည်ျခင်းအတြက္လက်တြေ့အသုံျးပုသပ်သာပေ်ာက္ကင်းခဲ့သောဆေးနည်ျးဖစ္ပါတယ်၎င်းဆေးနည်းအား မ်ွဝေပးလိုက္ပါတယ်ျပုလုပ္ပုံ၁။ငါးပုတ်သင်ခေါင်းထဲမွ ကေ်ာက္ကိုကျြမ်းအောင်လွော်အမှုန့်ကြိတ်ပြီး၎င်းအမှုန့် (၁)က်ပ်သားနွင့် မက္လင္ခ်ဉ္မှုန့် (၁)က်ပ်သားကိုရောပါ၂။သံပုရာသီး (၁)လုံးအရည်ညွစ္ပါ၃။ရောထားသောဆေး မှုန့္လက္ဖက္စားဇြန်း၁ဇြန်းခန့္ကို၎င်းသံပုရာရည္နွင့်သောက္ပါ(၃)ရက္ဆက္တိုက်သောက္ပါကေ်ာက္မ်ားက်ေပါမည် ဆီးသြားသည့်အခါကေ်ာက္မှုန်အနည္မ်ားဆီးနွင့်အတူ ပါလာပါမည်ညအိပ်ရာဝင္တိုင်းကေ်ာက္ဖရုံသီးအရည်၁ခြက် သောက္ပါ)ကေလးငယ္မ်ားဆီးမသြားသော်၎င်းဆေးမှုန့်အား ဆီးခုံသို့လိမ်းပေျးခင်ျးဖင့္ဆီးရွှင်ရွှင်သြားပါလိမ့္မည်